Ịzụta Levonorgestrel ntụ ntụ (797-63-7) hplc ma98% | AASraw
Levonorgestrel ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Nwanyi eji / Levonorgestrel ntụ ntụ
SKU: 797-63-7. Categories: Nwanyi eji, Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram na usoro nchịkọta nke Levonorgestrel powder (797-63-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Levonorgestrel ntụ ntụ bụ ọcha na-acha ọcha crystalline ntụpọ nke hormone progestational, ọ na-arụ ọrụ site na igbochi ịhapụ akwa site na ovary ma ọ bụ igbochi njikọta fertilization nke akwa site na spam (mkpụrụ ndụ nwa). O nwekwara ike ịrụ ọrụ site na ịgbanwe agbanwe nke akpanwa (akpa nwa) iji gbochie mmepe nke ime ime. A na-ejikarị Levonorgestrel gbochie ime ime, A na-enyekarị ya na ngwakọta nke agba ọsọ (Norgestrel, 6533-00-2).
Levonorgestrel ntụ ntụ video
Levonorgestrel ntụ ntụ isi agwa
aha: Levonorgestrel ntụ ntụ
Molekụla Formula: C21H28O2
Ọbara arọ: 312.45
Esi Point: 459.1 Celsius C na 760 mmHg
Ebe mgbari: 195.4 ° C
Ihe omuma zuru ezu. Maka Raw Levonorgestrel ntụ ntụ Iji Mara
Ọfụfụ na-emepụta ihe na Levonorgestrel na ịzigharị
Ọgwụ igbochi 1.Oral:
N'ebe dị ala, a na-eji ntụ ọka Levonorgestrel mee ihe na mpempe akwụkwọ atọ nke ọgwụgwọ ọgwụgwọ, nke nwere ọgwụ mgbochi nke dị na 100-250μg, na usoro ọmụmụ atọ nke 50μg / 75μg / 125μg. A na-ejikọta ya na estrogen ethinylstradiol n'ụdị ndị a.
N'ihe dị arọ nke 30μg, a na-eji ntụ ọka Levonorgestrel mee ihe na ntanetị mkpụrụ ọgwụ ụfọdụ.
Mgbochi ime mberede
A na-eji eriri Levonorgestrel mee ihe na ọgwụ mgbochi ọgwụ mgbochi (ECPs), ma usoro Yuzpe jikọtara ya nke gụnyere estrogen, na dịka Levonorgestrel raw powder-only method. Ntucha nke Levonorgestrel na-eji Levonorgestrel raw powder 1.5 mg (dịka otu ihe ma ọ bụ dịka 0.75 mg doses 12) dị na 3 ụbọchị nke mmekọahụ na-enweghị nchebe, otu nnyocha na-egosi na mbido oge 120 (5 ụbọchị) mgbe enwe mmekọahụ nwere ike ịdị irè.
Ihe kachasị dị na Levonorgestrel raw powder as progestogen-only mberede emergency contraception bụ, dị ka International Federation nke Gynecology na Obstetrics (FIGO), iji gbochie njikọ fertilization site na mgbochi nke ovulation na thickening nke mgbachi agwọ ọrịa .FIGO kwuru na: " nyochaa ihe àmà na-egosi na LNG [levonorgestreol] ECP enweghị ike igbochi nkedo nke egg egg. E kwesịghị itinye ederede na ntinye aha na labeling labeling LNG ECP. "Na November 2013, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ Europe (EMA) kwadoro mgbanwe maka edemede ahụ na-ekwu na ọ pụghị igbochi ntinye akwa egg. Ọmụmụ ihe ndị ọzọ na-achọpụta ihe na-egosi na ọ gaghị edozi. Ọ bụ na o yighị ka mgbochi ọrịa mberede ahụ ọ na-emetụta ịkụnye ya na ọ gaghị ekwe omume ikpochapu ohere ọ bụla nke ịmalite ịmịnye ụkọ. Na November 2013, EMA kwadoro mgbanwe ọ bụla maka aha HRA Pharma's NorLevo na-ekwu, sị: "N'ọnwa ndị a na-agwọ ọrịa, a na-ebelata mmekorita mmekorita na ụmụ nwanyị na-ebu 75 kg [165 pound] ma ọ bụ karịa, na ntụ ọka Levonorgestrel adịghị arụ ọrụ n'ime ndị inyom karịa 80 n'arọ. "Na November 2013 na Jenụwarị 2014, FDA na EMA kwuru na ha na-enyocha ma ibuwanye ibu na nchịkọta anụ ahụ (BMI) belata nrụpụta ọgwụ mgbochi mberede
Isi ihe dị na Levonorgestrel ntụ ntụ
Ezigbo ihe mejupụtara
Ejiri nke ọma
Ịdọ aka ná ntị na Levonorgestrel ntụ ntụ
Levonorgestrel raw powder is the same to all pharmaceuticals, ụfọdụ na-achọghị mmetụta pụrụ ime site na iji nke Levonorgestrel ntụ ntụ. Gwa dọkịta ma ọ bụ ọkachamara nlekọta ahụ ike mgbe niile tupu ị jiri ya. Mmetụta dị iche iche nke na-ewere 1.5 mg Levonorgestrel raw powder in clinical trials (nke 10% ma ọ bụ karịa kọọrọ) gụnyere: vomiting, hives, dizziness, isi ọwụwa, ọgbụgbọ, ịda mbà n'obi, ihe otutu, uru dị arọ, belata HDL, mgbu abdominal, swelling breast mgbe ị na-eje ozi, ihe mgbu nke uterine, na-egbu oge nsọ, nsọ nsọ dị arọ, ọbara ọgbụgba, na ike ọgwụgwụ, amenorrhea. Imeju akwara na akụrụ, a kwadoro ọtụtụ obi. mmetụta ndị a na-ahụkarị (nke 1% kwuru na 10%) na-agụnye afọ ọsịsa, ịgba agbọ, na nhụjuanya mgbu; mmetụta ndị a na-apụkarị n'ime awa 48, ọ pụghị ịbụ ọgwụ nchịkọta oge ọmụmụ, mgbe ọ bụla a ga-ewere ọgwụ ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na ya na-enye ọgwụ. Ụmụ nwanyị na-aṅụ sịga ekwesịghị ịnara (n'ihi mgbagwoju anya site na ọrịa obi).
Osisi na-edozi na Levonorgestrel (ma ọ bụ l-norgestrel ma ọ bụ D-norgestrel) bụ progestogen nke abụọ nke abụọ, ọ bụ ihe na-adịghị agbanwe agbanwe n'ime mmiri, nke nwere ike ịchọta na chloroform, nke nwere ike ịmepụta ya na ethanol na methylene chloride. N'ihi ọrụ mmepụta ahụ, Levonorgestrel raw powder nwere mmetụta antigonadotropic, ọ na-enwekwa ike igbochi ọmụmụ na mmepụta ọgwụ nke hormone na ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, ọ na-eme ka ọ ghara ime ka ụmụ nwanyị ghara imebiga ihe site n'ịkwalite gonadotrophin ịhapụ si gọọmentị. Nke a na - ebute ihe mgbatị nke hormone na - akpali akpali (FSH) na luteinizing hormone (LH) na nchikota nke nzụlite na ịzụ nwa. Ejiri ya dị ka ihe na-arụsi ọrụ ike n'ime ọgwụ mgbochi hormonal, gụnyere ọgwụ ọgwụ mgbochi ọnụ, ọgwụ mkpụrụ ọgwụ progestogen, ọgwụ mgbochi ọgwụ mberede, usoro intrauterine, implants na ọgwụgwọ ọgwụgwọ, ma enweghị ike ichebe megide ọrịa ndị a na-ebute site na mmekọahụ. a makwaara dị ka D-norethindrone, nke fọdụrụ Kanok ketone. Ọ bụrụ na ịchọta nweta nsonaazụ kachasị mma, ekwesịrị iwere ya ngwa ngwa n'ime oge 72 nke mmekọ, na oge nke abụọ 12 awa mgbe e mesịrị. Mkpụrụ ọgwụ ahụ dị irè karịa ngwa ngwa ha na-ewere ya mgbe ha na-enwe mmekọahụ.
Levonorgestrel raw ntụ ntụ
Levonorgestrelraw ntụ ntụ Marketing
Esi zuta Levonorgestrel ntụ ntụ si AASraw
Levonorgestrel: Ọ na - arụ ọrụ, ojiji, mmetụta ndị ọzọ
Raloxifene ntụ ntụ
JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ